देउखुरीको संरचनाबारे केही कुरा | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / देउखुरीको संरचनाबारे केही कुरा
देउखुरीको संरचनाबारे केही कुरा
Posted by: युगबोध in विचार November 6, 2018	0 149 Views
दे उखुरीलाई एउटा सुन्दर नगर बनाउदा कस्तो हुन्छ, सम्भव छ कि छै न ? छ भने किन बने को छै न ? यही प्रश्नको वरिपरि रहे र मनमा उब्जिएका सवालहरु पो ख्दै छु ।
दे उखुरीलाई सुन्दर नगर बनाउन सकिन्छ । किनकि दे उखुरी एउटा चारै तिर पहाडले घे रिएको ठाउ हो  । प्राकृतिकरुपमा बने को हरियो सुन्दर ठाउ हो । यसलाई अहिले को स् िथतिमा जस् तो सुकै पनि बनाउन चाहे बनाउन सकिन्छ । दे उखुरीलाई भन्ने हो भने यहा धे रै अन्नबाली उत्पादन हुन्छ । यसलाई अझै व्यावसायिक र मास् टर प्लान निर्माण गरे र कृषिमा जो ड दिए अझ धे रै उत्पादन हुन्छ । यहा कृषिमा प्लानिङको धे रै आवश्यक छ । यहाका मान्छे धे रै मे हनती र मिलनसार छन् र दे उखुरी शान्त ठाउ पनि हो  । यहाका मान्छे शिक्षामा लगभग ८० प्रतिशत रहे को मानिन्छ ।
दे उखुरीमा सबै मानिस कृषिमा आधारित हुनु तर कृषिमा यहा“का जनताले भने को जस् तो गर्न पाएका छै नन् । जस् तै स् थानीय सरकारले प्रत्ये क गाउ“मा एउटा साझा घर बनाइदिएको छ । त्यसमा सबै जनालाई कृषिको बारे मा अध्ययन गराउ“दा कस् तो हुन्छ । अध्ययन गराउ“दा जनतामा चे तना बढ्छ, कृषिको बारे मा थाहा हुन्छ– कसरी अन्नलाई सदुपयो ग गनेर् , भण्डारण कसरी गनेर् , उत्पादन कसरी गनेर् , लगानी कसरी गनेर् , कहा“ बे च्ने , कसरी बे च्ने भन्ने सबै किसिमका तालिमहरु दिदा अझ राम्रो हुन्छ । र, पशु से वामा पनि यहा“का किसानहरुले धे रै जो ड दिएको दे खिन्छ । तर त्यस अनुसारले किसानले फाइदा लिएको दे खिन्न । मुख्यतया यसको बारे मा चे तना छै न ।
अनुभव छै न । ज्ञान छै न । तर पनि किसानले भैसी पालन गरे को दे खिन्छ । किसानसग त्यस अनुसार लगानी छै न र खो र बनाउन सकिएको छै न । सो च छ तर लगानी छै न । यसलाई स् थानीय सरकारले घर घरमा गएर पशुको संख्या अनुसार तिनको गो ठ र दानापानी खुवाउने भा“डा र तिनीहरुको स् वास् थ्यमा लगानी गर्दा अतिराम्रो हुन्थ्यो  । यहा मुख्यतया सबै पशु से वामा स्थानीय सरकारले किसानहरुलाई मध्ययनजर गर्दा अति राम्रो हुन्थ्यो  ।
दे उखुरीलाई सुन्दर सजिलै बनाउन सकिन्छ । अहिले को अवस् थामा खे तीयो ग्य जमिनलाई प्लटिङ्ग गरे र खाली बाझा खे तबारी छाडे को दे खिन्छ । यसलाई कडारुपले रो क लगाउदा हुन्छ । किनभने यो एउटा उत्पादन हुने ठाउ हो  । यहा खाली ठाउमा उत्पादन कम हुन्छ । कम भएपछि जनतालाई चाहिने अन्नबाली कम हुन्छ । यो जनतालाई थाहा छै न । त्यसै ले यसमा जनतामा पनि यसको बारे मा ज्ञान हुन अति आवश्यक छ । ने पालमा अहिले ८० करो डको चामल बाहिरबाट आइरहे को छ ।
दे उखुरीलाई नगरको संरचना पनि उत्तिकै आवश्यक दे खिन्छ । दे उखुरीको संरचना हाइवे दे खि माथितिर उत्तर नगर बसाल्दा कस्तो हुन्छ । यहा“ एउटा नराम्रो पक्ष के छ भने नदीको छे उमा एउटा घर र खो लाको छे उमा अर्काे घर दे खिन्छ । यो यहाको संरचनाको नराम्रो पक्ष हो  ।
किनभने त्यसको बाटो छै न । बिरामी पर्दा आपतकालीन गाडी जाने बाटो छै न । यो एउटा घरलाई कसरी बत्तीअनि स्वच्छ पानी कसरी दिने ? यस् तै जनतालाई धे रै किसिमका अप्ठ्याराहरु छन् । अकोर् कुरो वर्षामा कति घरहरु ढले र बगिरहे को दे खिन्छ । त्यो त नगरको संरचनाको कमी हो  । बस्ने व्यवस् िथत क्षेत्र नभएको ले हो  । यसलाई ब्यवस् िथत नगरको संरचना गर्न आवश्क दे खिन्छ ।
यहा“का बासिन्दालाई जथाभावी घर बनाउन दिनुहुदैन । राज्यले के गर्नु पर्छ भन्दा हाइवे को माथि उत्तरतिर सरकारले त्यहाको जग्गालाई अतिक्रण गरे र खाली ठाउ या त्यसको मुआब्जा दिई नयाढंगले मास्टर प्लान बनाउन आवश्क दे खिन्छ । जस्तै चन्दीगढको कुरा गर्दा चन्दीगढ एउटा ब्यवस् िथत मर्यादिन सुन्दर हरियाली र शिक्षित ठाउ हो  । त्यहा जुनसुकै दै वी प्रको प ह“ुदै न । खो लानालाहरु छैनन् । सबै को घरमा बत्ती छ, बाटो छ । पानी छ स् वच्छ सफा छ । त्यहाको अनुसार बनाउदा अति राम्रो हुन्थ्यो  । त्यहा कुखुरा पालन, भै ंसीपालन खे तीबारी कुनै ब्यवसायहरु आवासको बीचमा दे खिन्न । यसरी एकै ठाउमा ब्यवस् िथत गर्दा सुरक्षाको हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ । सरकारसित के छै न, सरकारसित क्षमता छ, मास् टर प्लान छ, उर्जा छ, सबै चीज छ ।
मै ले एउटा तालिम लिएको छु जुन सर्च फर कमन ग्राउण्डमा । मै ले यसबाट धे रै कुराहरु थाहा पाए । ब्यवहारका कुराहरु दे खि जनताको माझ नजिकको सम्बन्ध यस्तै धे रै कुराको ज्ञान भयो  । सरकारले राम्रा –राम्रा तालिमहरु जनतालाई दिलायो भने जनता शिक्षित चे तनशील हुन्थे जसले गर्दा दे शमा शिक्षित र चे तनशील भएर दे शमा शान्ति छाउनेछ ।
Previous: लसुन र मसुरोको व्यावसायिक खेती गरिने
Next: फूलको महत्व हुने पर्व तिहार